Samachar Batika || News from Nepal » ‘छोरी मान्छेहरु लाई चा’न्स मा’र्न कसले खोज्दैन र’: गलबन्दी कि लजालु अञ्जली अधिकारी…..[तस्विर सँगै पुरा विवरण]
‘छोरी मान्छेहरु लाई चा’न्स मा’र्न कसले खोज्दैन र’: गलबन्दी कि लजालु अञ्जली अधिकारी…..[तस्विर सँगै पुरा विवरण]
काठमान्डौ ,लोकदोहोरी क्षेत्रकी व्यस्त मोडल हुन्, अञ्जली अधिकारी । उनले करिब चार सय हाराहारी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छन् । प्रकाश सपुतको बोल माया गीतबाट उनी धेरै दर्शकमाझ छाइन् । पछि प्रसाद फिल्मको वनकी चरी गीतमा नाचेपछि उनको मोडलिङ उचाई थप बढ्यो ।
उनी भन्छिन् -मेरो घर बर्दिया हो । चार वर्षअघि बासगढी भन्ने ठाउँमा महोत्सव चलिरा’को थियो । महोत्सवमा काठमाडौंबाट शंकर बिसी, बद्री पँगेनी, पशुपति शर्मा लगायत कलाकार आउनुभएको थियो । बद्री दाइले त्यहाँनेर दोहोरीमा प्र’तिस्पर्धा नै घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले म यहाँ स्टेजमा गाउँछु र स्टेज तल मेरो गीतमा जसले सबैभन्दा राम्रो र ज’र्बजस्त नाच्न सक्छ, त्यसलाई पाँच सय रुपैयाँ पुरस्कार दिन्छु भन्नुभयो । म पनि पूरा दिल खो’लेर नाचेँ ।पछि फस्ट पनि म नै भएँ ।पाँच सय रुपैैयाँ पनि पाएँ ।
पुरस्कार थापेपछि मैले उहाँहरु सबैलाई मेरो कलाकारिता रुचिबारे सुनाएँ ।त्यसपछि बद्री दाइले ‘हुन्छ, सुरुमा एउटा गीतमा चान्स दिन्छौँ ।त्यसमा तिमीले राम्रो गर्न सक्यौँ भने ज’मिहाल्छौँ नत्र फेरि घर फर्कने’ भन्नुभयो।त्यसको केही समयपछि बद्री दाइकै एउटा गीतमा काम गर्ने मौका पाएँ । त्यसमा राम्रो भयो ।
म पनि पूरा दिल खो’लेर नाचेँ ।पछि फस्ट पनि म नै भएँ ।पाँच सय रुपैैयाँ पनि पाएँ ।
बिस्तारै अफर बढ्दै गयो । त्यसरी यहाँसम्म आइपुगे । एउटा छोरी मान्छे भएर इन्डस्ट्रीमा लागिसकेपछि विभिन्न खाले प्रश्नहरु उठ्छन्, त्यसलाई पनि सहनुपर्छ । जस्तो, मेरै गाउँघरमा पनि म दोहोरीमा नाच्न आइपुगेको प’चेको थिएन । मेरै घरमा ममीलाई छरछिमेकले प्रश्न गर्थे । समाज त त्यस्तै हुनेरै’छ ।
ए छोरीलाई त्यहाँ पठाइस्, अब बि’ग्रिन्छे, अब भ’त्किन्छे, अब ब’र्बाद हुन्छे भन्दै टि’प्पणी गरेछन् । अरु त अरु मेरो ममीलाई ड्याडी र दाइलेसम्म ट’र्चर दिनुभयो त्यतिबेला । तर ममीको पूरा सहयोग थियो । बाबाको सपना त मलाई स्टार्फ नर्स बनाउने थियो तर हिरोनी बन्न भागेर काठमाडौं आइपुगेँ । उहाँ पनि रि’साउनुभएको थियो ।
ए छोरीलाई त्यहाँ पठाइस्, अब बि’ग्रिन्छे, अब भ’त्किन्छे, अब ब’र्बाद हुन्छे भन्दै टि’प्पणी गरेछन् ।
जब मेरा भिडियोहरु रिलिज हुन थाले, त्यसपछि उहाँ पोजिटिभ हुन थाल्नुभयो । अहिले त ममीभन्दा बढी मेरो भिडियो बाबाले सेयर गर्नुहुन्छ । सुरुमा आउँदाखेरी नै जग बलियो भएर होला मलाई कसैले हे’प्न सकेन । सिनियर दाइहरु बद्री पंगेनी, पशुपति शर्मा, शंकर बिसीहरुको सपोर्ट थियो, त्यही भएर पनि कसैले केही गर्ने हिम्मत गरेन । सायद म अर्कै माध्यमबाट आएको भए मलाई पनि त्यस्तो प्रयास हुन्थ्यो होला, नहुने होइन । छोरी मान्छेहरुलाई चा’न्स मा’र्न कसले खोज्दैन र, खोजिहाल्छ नि ! तर, आफू स’चेत हुनपर्छ त्यस्तो कुरामा ।
एकपल्ट कार्यक्रममा जाँदाखेरी आयोजकका दाइहरुले बसेर वा’इन खाऊ न, हु’क्का तानौँ न, रुमसँग पु¥याइदिउँ ? जस्ता प्रस्ताव गर्न थाल्नुभएको थियो ।ट’चसम्म गर्न खोज्नुभएको थियो ।त्यो बेलामा म अझै बच्चै थिएँ ।उहाँको नियतमा समस्या देखेपछि तत्कालै शंकर दाइ (बिसी)लाई फोन लगाएर मलाई यस्तोयस्तो भनि राछ भनेर सुनाएँ ।शंकर दाइले फोन देऊ, म कुरा गर्छु भन्नुभयो ।लास्टै झ’पार्दिनुभएछ। त्यस पछि चु’प लाग्यो । त्यसैले म सधैँ भन्छु, स’हेर बस्नुहुन्न ।
छोरी मान्छेहरुलाई चा’न्स मा’र्न कसले खोज्दैन र, खोजिहाल्छ नि ! तर, आफू स’चेत हुनपर्छ त्यस्तो कुरामा ।
कि आफैँले प्र’तिकार गर्नुपर्छ, आफैँ सकिँदैन भने सिनियर दाइहरुलाई तत्कालै सुनाएर भए पनि ए’क्सन लिनुपर्छ । थ्याङ्क गड, त्यतिबेला ब्वाइफ्रेन्डले ब्रे’कअप दियो र त म अहिले यहाँसम्म आइपुगेँ । ब्वाइफ्रेन्डलाई बोकेर हिँडेको भए त कहाँ पुग्थे कहाँ ! यो क्षेत्रमा आइपुग्न त रत्तिभर सपोर्ट थिएन । कि इन्डस्ट्री कि मलाई रोज रे ! मैले इन्डस्ट्री रोजेँ ।
प्रकाशित मिति २ चैत्र २०७६, आईतवार १६:०७